केही नेपाली हरु दशै हाम्रो होइन हिन्दुको हो भन्छन बिदेशी ले धुनधान सग मनाउछन – Hot Post News
काठमाडौं। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरीले दशै मनाएका छन्।रातो टीका र पहेलो जमरा लगाएर उनले हिन्दू धर्मको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैं मनाएका हुन्।दशैँ मनाउँदै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरी । उनले आफै पनि टीका लगाएका छन् र अरूलाई पनि टीका लगाइदिएर काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूताबासलाई नै दशैमय बनाइदिएका छन् ।राजदूताबासका कार्यरत अमेरिकी कर्मचारी पनि नेपाली पहिरनमा सजिएर दशै मनाएका हुन्। तस्बिर-अमेरिकी दूताबास काठमाण्डौँ
Prevगर्भवती बनाउनेलाई ५ सय युरो दिने यी युवतीको घोषणा
Nextहोशियार ! मोबाइल सिरानी छेउ राखेर सुत्नु हुन्छ ? एकचोटी अबस्य पढ्नुहोस